Mmebe nke Akwụkwọ Akụkọ Email | Martech Zone
Marketingre ahịa email bụ ụzọ kachasị dị mfe ma dị oke ọnụ iji rute ndị na-ege gị ntị ma mee ka ha tinye aka. O nwere ike ịbụ ngwa ngwa ịkwọ ụgbọala maka azụmaahịa gị nke ị na-achọ!
N'aka nri atụmatụ ịzụ ahịa email n'ọnọdụ, ị nwere ike nweta ohere ka ukwuu nye ndị ahịa gị dị na ndị nwere ike iwepụta ma tinye ozi gị n'ihu nnukwu ndị na-ege ntị.
Otu uru dị ukwuu nke ịre ahịa email karịa ịre ahịa mgbasa ozi bụ na ọ na-enye gị ohere ịkọrọ ndị ahịa gị ọkwa nke onwe gị ka ị nwere ike ịhazi ozi ịntanetị maka ụdị ndị ahịa ọ bụla.
Ozi ịntanetị ahaziri iji gboo mkpa nke ndị ahịa ọ bụla, nyere gị aka ịtinye na ndị na - agụ akwụkwọ gị ma nye ha ihe bara uru.
Akwụkwọ Ozi Email
Akwụkwọ ozi email ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ E-akwụkwọ na-etolite akụkụ dị mkpa nke atụmatụ mkpọsa ozi ịre ahịa email. Ha na-enyere gị aka ka gị na ndị ahịa gị na-emekọ ihe ma mee ka ha mara ọrụ azụmahịa gị.
Ọbụghị naanị na ọwa a na - enyere gị aka ikwusa ozi dị mkpa, kamakwa ọ na - enyere gị aka iwulite aha gị, me ka njikọta dị ike ma mụbaa ahịa.
Enweghị iwu ọ bụla maka ikpebi ma ị ga-edebe akwụkwọ akụkọ E-akwụkwọ gị kwa izu, kwa ọnwa, kwa ọnwa ma ọ bụ kwa afọ. Ikwesiri iburu ebumnuche a n'uche- inye ọdịnaya nke na-eme ka ndị debanyere aha gị jikọọ, itinye aka ma gwa gị ngwaahịa, ọrụ, rụzuru na mmemme gị.
Ihe mere Akwụkwọ Akụkọ Email Ji Bara Uru
Akwụkwọ ozi email nwere ike inyere azụmahịa gị aka itolite n'ụzọ ndị a.
Kwọ ụgbọala na weebụsaịtị gị - Ọ na - enyere gị aka ịkwalite igwe njin ụlọ ọrụ gị wee na - emegharị okporo ụzọ webụsaịtị gị. Site na njikarịcha njikarịcha nchọta ka mma, ebe nrụọrụ weebụ gị na-ahụ ndị nwere ike ịzụrụ ihe.
Na nzacha ọpụpụ - Ezigbo akwụkwọ ozi email na-enye ndị na - agụ akwụkwọ nhọrọ nke ịpụ na ịnweta akwụkwọ ozi, nke pụtara na ị ga - amata ndị ahịa gị na - eduga bụ na ị nwere ike ilekwasị anya na ha.
Stay Na-anọ n’uche Ndị Ahịa Gị - Akwụkwọ akụkọ email mgbe niile na-echetara ndị ahịa gị ihe na-aga n'ihu ma nyere ngwaahịa na ọrụ gị aka ịnọ na uche nke uche onye ahịa gị.
Ezigbo ụzọ nke ịkwalite ngwaahịa na ọrụ ọhụụ - Akwụkwọ akụkọ Email na-enye gị ohere imelite ndị ahịa gị gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọhụụ ọ bụla.
Ngwaọrụ dị ike maka Conversion - Inwere ike inye onyinye na ego pụrụ iche na ngwaahịa na ọrụ gị maka ndị debanyere aha na akwụkwọ akụkọ. Nke a ga - agba ha ume ịzụrụ n'aka gị ma mekwaa ndenye aha akwụkwọ akụkọ gị.
Mmebe nke Akwụkwọ Ozi Email Star
Idebe ya ka enyi na enyi - howtụle otú ọtụtụ ndị si elele ozi ịntanetị ha na ekwentị, ọ bụ ihe ọ bụla na ị ga-echekwa akwụkwọ ozi email gị na-edebe mkpanaka ederede na-eburu n'uche. Otu ogidi okirikiri nhọrọ ukwuu bụ kwesịrị iji hụ na mobile ndakọrịta.
Ziri ozi Aha na Adreesị Ozi Emailntanetị - Iji gị ụlọ ọrụ aha na adreesị ozi-e na dị ka ziri ozi aha ya bụ ndị kasị dịrị nchebe nhọrọ. Nke a dị mkpa dịka aha ndị amaghi nwere ike ịkọ dịka spam.
Isiokwu Isiokwu Email - Ihe niile gbadata na otu ahịrị a! Usoro okwu ziri ezi bụ ihe ọ ga - ewe ka ịmeghe akwụkwọ ozi E-ma ọ bụ ka ahụghị gị. Ha kwesiri ka ochicho (ihe odide 25-30 gosiputara na otutu ngwa ngwa) ma tinye aka. Greatzọ dị mma iji mepụta usoro isiokwu bụ site na ịhazi onwe. Ọ bụrụ na ahịrị isiokwu ahụ nwere aha onye nnata gị, o yikarịrị ka ọ ga-emepe ya.
Pre-nkụnye eji isi mee na Preview Panes - Ihe ederede tupu ma ọ bụ ederede ederede na-akpaghị aka site na mmalite nke email gị, ugbu a ọ ga-ekwe omume ịme ya ahaziri. Ọ bụ ezigbo ohere iji gosipụta onyinye ma ọ bụ mwepu ego ọ bụla. N'otu aka ahụ, ị ​​nwekwara ike ịhazi ọdịnaya egosiri na pane preview. Nke a bara uru mgbe emepere email na ngwaọrụ ka ukwuu.
Isi Okwu Na-ekwenye ekwenye - Mepụta catchy na relatable akụkọ na-eburu gị iche ahịa n'uche. N’otu aka ahụ, a ga-echepụta obere isi okwu niile n’ebumnobi nke ịdọrọ uche onye na-agụ ya ma jide mmasị ha ka ha na-agabiga leta ahụ.
A Na-agbanwe agbanwe Design - Ndị na - agụ akwụkwọ gị kwesịrị inwe ike ịmata akara gị site na ndebiri, agba na akara na akwụkwọ akụkọ ahụ. Ugboro ịgbanwe agbanwe imewe gị dị njọ maka njirimara njirimara.
Ọdịnaya bụ Eze! - Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ka ndị na - agụ akwụkwọ gị debe ndebanye aha ha, ịkwesịrị inye ha ọdịnaya mara mma. Agụụ na-atọ ụtọ agaghị abụ naanị nke ndị debanyere aha n'onwe ha kama ha ga-achọ ịkọrọ ya ndị ọzọ. Mee ka ọdịnaya gị dị ntakịrị, na-ezi ihe ma na-adị mfe ọgụgụ. Gụnye ọnụọgụ ahịa nke ugbu a na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ zuru oke iji soro ndị na-agụ akwụkwọ gị.
Nhazi okpokoro - Agbanyeghị etu ọdịnaya gị si dị mma, nhazi na ngosipụta na-adịghị mma ga-eme ka ị ghara ilebara onye na-agụ ya anya ma gbochie gị ịmepụta mmetụta ziri ezi. Enweghi ike ichota ihe omuma na akwukwo ozi nile ma weputa ya nke oma na ngalaba ma obu ihe omuma. Isi okwu bu idobe ya ma mekwaa ka onye ahia gi jua.
CTAs na Njikọ Bara Uru --Gbalịsie ike na nkụnye eji isi mee gị, akara ụlọ ọrụ yana onyogho ọ bụla nwere njikọ na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ. I nwekwara ike ịgụnye njikọ “Gụkwuo…” njikọ ndị na-eduzi ndị na-agụ akwụkwọ gaa webụsaịtị gị maka isiokwu ọ bụla, ngwaahịa ọhụụ, ọrụ ma ọ bụ onyinye. Dị ka a tụlere na mbụ, akwụkwọ akụkọ bụ ikpo okwu zuru oke iji kpalie ndị ahịa gị ime ihe. Oku oku ime ihe obula nke edere na ọdịnaya kwesiri iguzo ma doo anya nye ndi na agu akwukwo.
Footkwụ - Ọ kwesịrị ịnwe ozi kọntaktị zuru oke nke ụlọ ọrụ gị yana mgbasa ozi mmekọrịta gị na njikọ weebụ gị. Na wepu aha njikọ ahụ na-abanyekwa n'okpuru akwụkwọ akụkọ gị.
Mepụta akwụkwọ ozi email dị irè, dị elu dị oke mkpa maka atụmatụ ịre ahịa email gị.
The InboxGroup bụ azịza ozi ịre ahịa email gị niile nke na-enye aka na iwuli ozi ịntanetị na akwụkwọ akụkọ email maka azụmahịa gị.
Tags: email isinhazi ihuenyoozi emailpreheader emailadreesị ozi ịntanetịemail isiokwu akaraakwụkwọ ozi email mobile
Jun 28, 2019 na 3:42 AM
Daalụ maka ndụmọdụ. Ana m agbalị ịchọta otú m ga-esi hichaa ndepụta nzipu ozi m nke ọma. M na-emeghe ọnụego dị mma mana echere m na ọtụtụ ndepụta m anaghị emepe. Ma eleghị anya, m na-ezigara ha ọtụtụ ozi, mana m na-anwa ịkụziri ha site na email ma ọ dị m mkpa ịnọgidesi ike.
Jul 1, 2019 na 9: 52 AM
Ndewo Mozie, enwere ohere na ozi ịntanetị ndị ahụ emeghị ka ọ ghara ịbanye na igbe mbata. Can nwere ike iji ngwá ọrụ dịka ndị mmekọ anyị na 250ok iji lelee igbe nnyefe igbe mbata gị iji hụ ma ọ bụrụ na ụfọdụ ndị ISP na-akpali gị gaa na junk nchekwa. I nwekwara ike iji ngwá ọrụ dịka ndị mmekọ anyị na Agbanyela iji hụ ma adreesị email ndị ahụ hà dị irè n'ezie. Imirikiti oge anyị na-ahụ ọnụọgụ ndị a na-emegheghị, ọ bụ ma ọ bụ adreesị ozi-e nwere ike iwepu ma ọ bụ na-enweghị atụ, ma ọ bụ na anyị nwere nsogbu na nnweta anyị nke anyị kwesịrị dozie ma mezie. Nke ahụ nwere ike ịbụ nsogbu akụrụngwa, na a kọọrọ anyị na aha ojii nke ụfọdụ ma chọọ igosipụta na aka anyị dị ọcha, ma ọ bụ na ọdịnaya anyị na-ebute ụfọdụ nzacha spam nke ISP. Ọ bụ ụlọ ọrụ siri ike… ọkachasị maka ndị na-eziga eziokwu!